ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Software System တွေအသုံးပြုတာနည်းရသလဲ? ~ The ICT.com.mm Blog
ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Software System တွေအသုံးပြုတာနည်းရသလဲ?
ကျွန်တော့်အမြင် အရပြောကြည့်မယ်နော်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာဖြစ်လို့ Software System တွေအသုံးပြုတာ နည်းရတာလဲဆိုရင် IT နည်းပညာ မတိုးတက်သေးလို့၊ ပြီးတော့ IT နည်းပညာကို ကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်သေးလို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Computer တွေ Internet တွေရှိပြီး ဘယ်လိုအသုံးချလို့ ချရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြတာတွေများတယ်။ ဥပမာပြောရရင်- ဝန်ထမ်း ၃၀၀ လောက်ရှိတဲ့ Company တစ်ခုမှာ လစာပိုင်းတွေ၊ စာရင်းပိုင်းတွေကို များသောအားဖြင့် Manual (Paper System) တွေနဲ့ သုံးကျတာများတယ်။ အဲဒီအတွက် လူအင်အား ၆​ ယောက်၊ ၇ ယောက် ကတော့ အနည်းဆုံးလိုလိမ့်မယ်။ လူအင်အား ၆ ယောက်၊ ၇ယောက် အပြင် အချိန်ပါ တော်တော်ပေးရလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့သာ Software System အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လူအင်အားအဲဒီလောက်ပေးစရာမလိုတော့ပဲနဲ့ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ အကုန်ပြီးဆီး နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့ Company တော်တော်များများ Software System တွေကိုအသုံးမပြုကြသလဲဆိုရင် System တစ်ခုခုကိုပြောင်းဖို့ တော်တော်လေး ဝန်လေးနေကြတယ်။ “ငါဒီ System ကြီးကိုပြောင်းရင် အဆင်ပြေပါ့မလား” ဆိုတဲ့စိတ်တွေများနေကြတယ်။ ကျွန်တော်အရင် Company တစ်ခုမှာဖြစ်ဖူးတယ်။ MD က ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး Paper စနစ်တွေကို Software စနစ်ပြောင်းဖို့ခေါ်ပြောတယ်။
ကျွန်တော်က Paper စနစ်ကနေ Software စနစ် ကိုပြောင်းဖို့အတွက် တော်တော်လေးကို စိုးရိမ်နေတယ်။ “ငါဒီ System ကြီးကိုပြောင်းရင် အဆင်ပြေပါ့မလား” ဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ Company တစ်ခုလုံးအသားကျနေတဲ့ Paper System ကြီးကို Software System ပြောင်းဖို့ဆိုတာ တော်တော်စဉ်းစားရတယ်။ Computer သုံးတတ်တဲ့သူတွေရော Computer ကိုအခုမှအဖွင့် အပိတ်လုပ်ဖူးတဲ့ သူတွေရောဆိုတော့ စိုးရိမ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် MD ကရဲရဲသာပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းရင်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ပြောင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့။ ၂လ ၊ ၃ လလောက်ကြာတော့ အသုံးပြုတဲ့သူတွေလဲ တော်တော်လေးအသားကျလာတယ်။ အသုံးပြုတဲ့သူတွေကို Tanning တော့တော်တော်ပေးလိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာက Software System ကိုအသုံးပြုကြည့်ကြည့်ပါ။ Paper System ကနေ Software System ကိုပြောင်းဖို့အတွက်မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့။ အဲဒီလိုတွေ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာမှ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် IT သမားတွေကလည်း နည်းပညာပိုင်းတွေကို အမြဲလေ့လာနေရမယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုးတဲ့ အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လက်ရှိကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Software Application တွေ၊ Windows OS တွေက License Version တွေမဟုတ်ကြဘူး။ Crack Version တွေကို အသုံးပြုနေကြတာ။
အဲဒီလိုအသုံးပြုတာကောင်းတာရှိသလို၊ မကောင်းတာလဲရှိတယ်။ မကောင်းတာကတော့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ Latest Version Application တွေ၊ Windows OS Version အသစ်တွေကို ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ပြီးအလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ရတော့ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ Software တွေကို အထင်မကြီးတော့ပဲ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ကျပ်လောက်နဲ့ ရတယ် ဆိုပြီး စိတ်ထဲစွဲသွားကြရော။
အဲဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင် Software Company မှာ Customize Software သွားအပ်တော့ Software တစ်ခုကို သိန်း ၅၀ လောက် အနည်းဆုံးပေးရတယ်၊ အဲဒီမှာ Software သွားအပ်တဲ့သူ မျက်လုံးပြူးသွားပါလေရော။ သူသိတာက Software CD ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ၁၀၀၀ ကျပ်လောက်ပေးလိုက်တာနဲ့ Application Software အသုံးပြုလို့ရပြီဆိုတာပဲ သူသိတာလေ၊ ဒီလိုသွားအပ်ရင် အဲဒီလောက်ပေးရတယ်ဆိုတာ သူဘယ်သိမှာလဲ။ Customize Software တစ်ခါရေးရင် အဲဒီလောက်ပေးရတယ်ဆိုတာ သိပြန်တော့ Company တွေကလည်း Software System မပြောင်းကြတော့ပြန်ဘူး။
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ Customize Software အသုံးပြုတဲ့ Company ကြပြန်တော့ သူသုံးမယ့် Software Feature ထဲမှာ Internet ကိုအသုံးပြုပြီးသုံးရမှာဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Internet ကြီးကသိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ။ Customers တွေကိုသာ Internet Line တွေလှိမ့်ပိတ်ရောင်းနေတာ၊ Internet Bandwidth ကျတော့ မချဲ့ပဲနဲ့။ ကြည့်ရတာ ဒီလိုနဲ့ပဲသံသာရာ လည်နေအုံးမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသံသာရာလည်နေတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Internet ကြီးကတော့ ထိပ်ဆုံးကပေါ့။
Newer PlayStation4Review
Older Slide Launcher App ကိုသုံးပြီး Android ဖုန်းမှာ ရှိတဲ့ Apps တွေကို လျှင်မြန်စွာ ဖွင့်ကြမယ်
ပြည်တွင်းဆော့ဖ်ဝဲ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစေရန် ကော်မတီဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်
ပြည်တွင်းရှိဆော့ဖ်ဝဲ Industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ဦးစီး၍ SIDC (Software Industry Development...
3 thoughts on “ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Software System တွေအသုံးပြုတာနည်းရသလဲ?”
သု ထက္ says:
ေကာ္နရွင္ မေကာင္းလို ့ေပါ့
Minn Pyae Sone says:
ေစ်းႀကီးပီး .. after sale service ဆိုတာ ေခ်ာင္ထဲေရာက္ေနလို႔ .. 😀
Yan Kyaw Oo says: